मनकामना माताले सबैको कल्याण गरुन ! बि. स. २०७४ साल पौष २८ गते शुक्रबार इश्वी सन २०१८ जनवरी १२ तारीख माघकृष्ण पक्ष, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल « Light Nepal
मनकामना माताले सबैको कल्याण गरुन ! बि. स. २०७४ साल पौष २८ गते शुक्रबार इश्वी सन २०१८ जनवरी १२ तारीख माघकृष्ण पक्ष, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Published On : 11 January, 2018 11:33 pm
आज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल पौष २८ गते शुक्रबार इश्वी सन २०१८ जनवरी १२ तारीख माघकृष्ण पक्ष एकादशी तिथी चन्द्रमा बृश्चिक राशिमा सुर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु षट्तिला एकादशीव्रत – ज्यो . पं . सरोज घिमिरे / लाइट नेपाल डटकम
मेष राशि –चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । मनमा कुबिचारले बास गर्नाले भोलिको समयमा केहि झन्झज पर्न सक्छ । खर्चको योग रहेको हुनाले लगानिमा ध्यान दिनु होला ।
प्रेम सम्बन्धमा केहि सुधार आउने छ । ब्यापार ब्यवसायको निम्ति राम्रो समय रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षामतामा बृद्यि हुनेछ । मित्रजनहरु बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामान्य यात्रा रहन सक्छ ।
स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । अरुको सहयोग निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । कुरा काट्रने ब्यक्ति हरुको बृद्यि हुनेछ । शत्रु सबल रहलान ।
मनोरञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । सामान्य आम्दानि हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्र जन को साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला । बिद्या प्राप्ति योग तथा बौधिक बिकाश हुने समय रहेकोछ ।
भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । श्रम परीश्रमको कदर नहुनाले मनमा सामान्य चिन्ता हुनेछ ।
खानपान मा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कामको क्षेत्रमा भने साधारण झन्झट तथा अप्जस सहनु पर्ला । दाजु भाई बिचको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । आय आम्दानिमा बृद्यिहुने योग रहेको छ ।
आजको तपाई लगानि भोलि लाई बिशेष फाइदा जनक रहनेछ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । खानपानमा बिशेष रुचि रहने छ । मधुर बाणीका कारण बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ ।
मान्यजनको भेटघाट बाट मन प्रशन्न रहला । मित्रजन तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार रहने छ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहन सक्छ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट ब्यहोनु पर्ला । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ ।
धनु राशि – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भ
खर्च बढ्ने योग रहेकोले सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । बिश्वासिलो ब्यक्ति बाट धोकाहुनाले गरिरहेको काममा बिशेष झमेला पर्न सक्छ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरू को कारण सामान्य चिन्ता बढ्न सक्छ । दाम्पत्य सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
आय आम्दानि क्षेत्रमा बिशेष राम्रो समय रहेको छ । मित्रजनहरु बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला । यात्रा फाईदा मुलक हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । सामान्य स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउन सक्छ ।
काम काज क्षेत्रमा बिशेष रुचि जाग्नेछ । कार्यसम्पादनमा झन्झट हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । परीबारका कोहि सदस्य हरुको स्वास्थ क्षेत्रमा झमेला पर्न सक्छ । बौधिक बिकास तथा विद्या प्राप्ति योग रहेको । समय मध्यम रहनेछ ।
मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा मिल्ने छ । मनोरञ्जनको निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । श्रम परीश्रमको राम्रो कदर हुने समय रहेको छ । सबारी साधन को प्रयोगमा ध्यान दिनु होला सामान्य झन्झट रहन सक्नेछ ।
मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! साप्ताहिक राशी फल ( भाद्र २३गते देखि २९ गते सम्म)
मेषः–सोमवार मध्यान्ह सम्म समयले साथ दिने छैन । राप र ताप बढ्नेछ भने कहि कतैबाट
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल भाद्र २४ गते आइतबार
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः
पशुपतिनाथले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल भाद्र २३ गते शनिवार
विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री डा खतिवडाको आग्रह
वाशिङटन डिसी, २१ साउन । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई पर्यटन, वित्त
पार्टीको महासमितिको बैठक छिटा् बस्नुपर्ने पर्छ:
१२ वर्षका बालकले गरे तीन वर्षीया
लुक्लामा दुईवटा हेलीकप्टर एक आपसमा ठोक्किए,
भारतमा सामुहिक बलात्कारमा परेकी नेपाली युवतीले
शिक्षक र बिध्यार्थि नेपाली कमेडी भिडियो